Shirkadda Hormuud oo ku dhawaaqday inay fulineyso mashaariic ay lahayd Dowladda Soomaaliya – War La Helaa Talo La Helaa
Shirkadda Hormuud oo ku dhawaaqday inay fulineyso mashaariic ay lahayd Dowladda Soomaaliya
By Jabra Shaaciye	 On Aug 22, 2019
Maamulka shirkadda Isgaarsiinta Hormuud Telecom ayaa markii ugu horeysay shaaca ka qaaday inay dalka Soomaaliya ka fulinayaan mashaariic Dowladda Federaalka Soomaaliya u sameysay Wasaarado gaar ah, iyadoo ay horay u jireen howlo kale oo ay dowladdu leedahay sida Dhaqaalaha, Waxbarashada iyo adeegyo kale oo lagama maarmaan u ah nolosha bulshada.
Sarkaal ka tirsan maamulka Shirkadda Hormuud ayaa khudbad ka jeediyay xaflad ka dhacday Muqdisho oo ay soo qabanqaabisay jaamacadda Jamhuuriya waxa uu si gaar ah uga hadlay adeegga EVC Plus ee lacagaha taleefanka la isugu diro, kaasi oo maalintii shalay hawada ka maqnaa saacado badan.
Waxa uu sheegay in shirkadda Hormuud adeegga EVC Plus si bilaash ah ku bixiso, isla markaana dalalka geeska Afrika shirkadaha ka shaqeeya uga qiimo badan tahay isticmaalka Internet-ka Talefoonada si ay dadku u helaan adeeg maaliyadeed.
“Hormuud waxay meel sare kaga jirtaa dhaqaalaha dalka, anagoo fulineyna sharciga QM u dejisay dalalka soo koraya” ayuu mar kale yiri sarkaalkaan oo meesha ka saaray in sharciga noocaasi ah uu dhigayo in dowladaha ka jira wadamadaasi ay hirgeliyaan, balse shirkad gaar loo leeyahay aanu boos uga bannaaneyn.
Waxa uu ku faanay sarkaalkaan in shirkadoodu 75% ay si bilaash ah ku isticmaalaan adeegga EVC Plus, isagoo aan wax cudurdaar ah ka bixin cilladaha soo noqnoqday ee maalmahaan hareeyay adeegaasi oo mudadii uu hawada ka maqnaa saameyn ku yeeshay guud ahaan dhaqdhaqaaqa macaamiisha shirkadda.
Shirkadda isgaarsiinta Hormuud oo ku dhow 30-sano dalka ka jirtay ayaa noqotay mid ka tallaabeysa xuduudkeeda, kaddib markii ay la wareegtay ganacsiga qeybihiisa kala duwan, waxbarashada iyo howlo kale oo gaar u ahaa dadka xoogsatada ah iyo kuwa dhaqaalahoodu liito sida iibinta caanaha, malabka, biyaha, cabitaanada kala duwan iyo kuwo kale.
Inta badan shaqaalaha ka howlgala shirkadda Hormuud iyo shirkadaha kale ee ay iyadu asaastay ayaa lagu qortay qaab ka duwan shirkadaha kale, waana inuu yahay mabda’ ahaan aaminsan yahay madhabta Wahaabiyada.
Dhinaca kale waxa uu sheegay sarkaalkan inay soo kordhineyso mashaariic kor loogu qaadayo Sayniska iyo Teleknolojiyada, taasi oo u muuqata inay markaan u bareertay sidii cagta u marin laheyd Wasaaradaha Dowladda Soomaaliya qaarkood ee ugu magacaaban maareynta mashaariicdaasi.
Akhriso: DF oo Go’aan ka soo saartay doorashadii maanta ka dhacday magaalada Kismaayo